news2dago | Janoary 2009
[Ankapobeny ] 21 Janoary, 2009 12:49
Nahazo fampitandremana ny Viva radio
Raha tsy manova famindra dia hakatona koa ny viva radio izay no azo hamitinana ilay taratasy nalefan'ny minisitera ny fifandraisana ho an'ny talen'ny viva radio. Ny fahazon-dalàna ho an'ny viva tv kosa dia efa nasorina tanteraka t@ ity orinasa iray ity. Mbola mandeha ihany aloha ny viva radio hatramin'izao. Fa ny Radio ravinala any Manajary kosa no nakaton'ny fanjakana fa nandefa ilay kabarin'i Andry TGV t@ asabotsy lasa teo!!! Anjaran'iza ny manaraka?
Manaraka izany dia anaovana fanadihadina manokana momba ny hetra ireo orinasa rehetra ny fianankavin'ny ben'ny tanàna ankehitriny! toy ny nataon'ny amiraly ny orisana tiko t@ 2001. Tena miverina koa eto ny tantara. LOL
Nalefa nivantana tao @ tvm kosa ny fanaovan'i Obama Hussein Barack Junior fianihanana omaly. Ary lasa saina ihany ny tena oe rahovina ny malagasy vao mba ahay hifandimby toerana toy izao. Hita teo avokoa mantsy ireo mpitondra rehetra nifandimby tany an-toerana. Tsy ho hita aty mihitsy izany oe prezida Ratsiraka sy Zafy Albert ary Ravalomanana hiaraka hisakafo izany. Mbola lavitrin'ny afo ny kitay.
Potika ny faritra atsinanana nolalovan'ny rivodoza Eric. Raha mbola mamakivaky ny tapany atsimo andrefana ny rivodoza Fanele.